မြစ်ဆုံ: ဂျပန်နိုင်ငံ၏ သဘာဝဘေးဒဏ်ကျရောက်ခံရမှု ဓါတ်ပုံများ
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ သဘာဝဘေးဒဏ်ကျရောက်ခံရမှု ဓါတ်ပုံများ
သံဝေဂ ရစရာတော. တော်တော်ကောင်းတယ်နော်။ သဘာဝဘေး ဆိုတာ ချမ်းသာတဲ. နိုင်ငံ ဆင်းရဲတဲ.နိုင်ငံ မခွဲခြားဘူး။ ခေတ်မှီသော နိုင်ငံ မဖွံဖြိုး သေးသေားနိုင်ငံ သူမသိပါ။ ရက်စက်တယ်လို.ဘဲ ပြောလို.ရမှာလား။ ဘယ်သူတွေက ကြိုးကိုင်ထားတာလည်း ဒီလိုသဘာဝ ဘေးတွေကျရောက်အောင် ။ ဒီလိုလည်း ပြောလို.မရပြန်ဘူး။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမှ မဟုတ်တာကို။ ဘယ်သူ.ကို အပြစ်တင်ရမှာလည်း။ မုန်းလို.လည်း မဟုတ်ဘူး ချစ်လို.လည်းမဟုတ်တာ ။ လူမျိုးရေးလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ နောက်ဆုံးတော. ကံကြမ္မာကိုဘဲ အပြစ်ပုံချရတော.မှာဘဲ။
သိုသော် ယနေ.ခေတ်မှီ တိုးတက်နေသောကမ္ဘာကြီးမှာ မနက်ဖြန်ဘာဖြစ်မည်ကို ခန်.မှန်းပေးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အနည်းနှင်. အများ ဆို ခန်.မှန်းချက်းများက မှန်ကန်သည်သာဖြစ်သည်။ ဖြစ်လာမည်ကို ကြိုသိနိုင်တော. တစ်ခုဘဲ ရှိတယ် ကာကွယ်နိုင်တာပေါ.။ သတိမထား ဂရုမစိုက်သော သူများကတော. အများဆုံးခံရမှာဘဲ။ ဒီနေ. ရေဒီယိုက ကြေငြာထားတယ် ပင်လယ်ထည်း မှာလိုင်းထန်မယ် -- ပင်လယ်ထည်းမထွက်ကြနဲ.. ထွက်ရင်တော. ဖြစ်ရင်ခံရမှာဘဲလေ။ သဘာဝဘေးဒဏ်ကို အပြစ်ပြောလို.မရပေမယ်. ကာကွယ်လို.တော.ရ ပါတယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတော. အနည်းနဲ.အများ ပျက်စီးမှုတွေ သေကြေမှုတွေ သက်သာမှာဘဲလေ။ ပြန်လည်ထူထောင်တော. လည်း လျှင်မြန်တာပေါ.။ မျက်စိနှလုံး နှားနှစ်ဖက်ကို ဖွင်.ထားဖို.တော.လိုအပ်ပါတယ်။
ယနေ.ကမ္ဘာ.ထိပ်တန်းစက်မှု နိုင်ငံ၊ အခြားသောနိုင်ငံများ သဘာဝဘေးဒဏ်များ ခံရပါက လှူဒါန်းမှုများ နောက်မကျဘဲ ပြုလုပ်သော ဂျပန်နိုင်ငံအပေါ် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ခဲ.တဲ. ရင်သက်အ.ံသြဖွယ် ဓါတ်ပုံများကို ကြည်.ကြရအောင်--
Posted by မောင်မောင် at 14:59